NATO oo soo afjaraysa hawlgalkii Libya – Radio Daljir
Tripoli, Oct, 31 – Hawlgalkii Nato ee Libya ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo soo afjaro Isniintan maanta ah , iyadoo Nato ay sheegtay in lagu guulaysatay hawlgalkaasi.
Soo afjarida hawlgalka Nato ee dalka Libya ayaa imanaya, iyadoo asbuucii hore golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ay meel-mariyey cod loo dhanyahay oo ku aadanaa in lasoo afjaro hawlgalka isbahaysiga Nato ay ka wadeen Libya mudo 7 bilood ah.
Bishii March golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey waxa uu fasaxay in la qaado dhammaan talaabooyinka lagama maar-maanka ah, si loo difaaco dadka rayidka ah ee Libya. waxana ku dhawaaqista soo afjarida hawlgalkii Nato ee dalka Libya timid, kaddib markii dhowaan la dilay hoggaamiyihii hore ee dalka Libya Col Mucamar Al-Gaddafi oo khatar dhanka amniga ah loo arkayey.
Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta Nato Anders Fogh Rasmussen ayaa sheegay in hawlgalka Libya ee loogu magacdaray ? hawlgalka difaacaha Midaysan ? uu ahaa mid kamid ah guulihii ugu weynaa ee ay gaadhay Nato taariikhda.
Hawlgalka Nato ee Libya ayaa la bilaabay 19 March, markaasi oo ciidamada Col Gaddafi ay ku dhowaayeen magaalada Benghazi oo xudun u ahayd mucaaradka Libya.
Intii uu socday hawlgalka ilaalliyaha midaysan ayaa waxaa la qaaday 26,000 s duulimaad weera ah, waxana la sameeyey 10,000 ( toban kun ) oo duqayn ah, iyadoo la burburiyey ilaa 1000 ay lahaayeen ciidamada daacada u ahaa Col Gaddafi.